Maxamed Xasan fiqi oo sheegay in dagaalka ka socda Marka uu u dhaxeeyo Kacaanka shacabka iyo Shabaab – idalenews.com
Maxamed Xasan fiqi oo sheegay in dagaalka ka socda Marka uu u dhaxeeyo Kacaanka shacabka iyo Shabaab
Idalenews-Kusimaha Madaxweynaha Koofur Galbeed ahna Wasiirka Beeraha Maxamed Xasan Fiqi ayaa sheegay in dagaalka ka socda Marka uu u dhaxeeyo shacabka deegaanka iyo Shabaab, isagoo xusay in Al-Shbaaab ay dooneyso inay qabsato magaalada Marka, balse laga hortagay.
“Maamulka Koofur Galbeed iyo dadka deegaanka oo is kaashanaya iyo Nabad diidka Shabaab ayuu dagaalka u dhaxeeya, dhowaanahan Al-Shabaab wey soo laba kacleeyeen, meelihii baadiyiha waa laga soo saaray, waxay xoogga soo saareen magaalada Marka, oo ay rabaan inay gacanta u gasho, maadaama magaalo istiraatiiji tahay, waana laga hortagay”ayuu yiri Kusimaha Madaxweynaha Koofur Galbeed.
Waxaa uu sheegay in magaalada Marka ay tahay xarunta ganacsiga Maamulka Koofur Galbeed, isagoo intaa ku daray in aanay ka jirin dagaal ku saleyn arrin qabiil oo magaalada ka jira sida uu yiri.
“Wax dagaalo ah oo dagaaladii ku saleysnaa habka qabiil oo ka jira magaalada ma jiro, beelo horay u dagaalay waa jireen, balse arrimahaas wada hadal iyo dib u heshiisiin ayaa ka jiro, dagaal beeleedkiina meesha waa ka baxeen, dagaalka ugu xun waxaa qoladan ma naxayaasha ah ay wadaan ee Shabaab”ayuu mar kale yiri Ku simaha Madaxweynaha Koofur Galbeed.
Sidoo kale waxaa uu ku eedeeyay Al-Shabaab inay isku diraan beelaha, kana dhex faa’ideystaan, iyagoo ka dhex hurinaya colaad sida uu yiri.
Magaalada Marka iyo deegaanad au dhow dhow ayaa muddo sanado ah waxaa ka taagnaa colaad u dhaxeeyay labo beelood oo isku haya gacan ku heynta magaalada, waxaana heshiisyo xabad joojin ah oo dhowr jeer laga gaaray dagaalka ay noqdeen kuwo bur buray oo dib ay dagaaladu u soo laabteen
Golaha shacabka oo manta ansixiyay Miisaaniyadda Sanadkan 2017
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo booqday Keydka Raashinka ee Ciidanka xoogga dalka soomalia